SBS Language | COVID-19 update: NSW oo ku dhawaaqday in ardaydu fasalada ku laabanayaan marka la gaaro bisha October
COVID-19 update: NSW oo ku dhawaaqday in ardaydu fasalada ku laabanayaan marka la gaaro bisha October
Wararkii u danbeeyay ee coronavirus-ka Australia 27 Agoosto 2021.
Imtixaanada dugsiga sare ee NSW oo dib loo dhigay ilaa 9 Nofember
10 kays ee COVID-19 Victoria mid ayaa ku dhacay qof deggan Shepperton
ACT oo wax ka badalaysa xanibaadaha saaran ganacsiyada
Hay'adda Daawooyinka Australia (ATAGI) ayaa ansixisay in talaalka PFizer lagu duri karo caruurta da'doodu u dhaxayso 12-15.
NSW ayaa laga diiwaan galiyay 882 kays oo cusub oo coronavirus ah, iyadoo 80% kaysaska laga helay Galbeedka iyo Koofur Galbeed Sydney. Labo qof oo da'doodu kala ahayd 60 meeyo iyo 90 meeyo jiro ayaa u dhintay cudurka.
Premierad Gladys Berejiklian ayaa ku dhawaaqday qorshe ardaydu fasalada dib ugu noqonayaan:
Laga bilaabo 25 October - Ardayda Kindergarten iyo sanadka koowaad
Laga bilaabo 1 November - Sanadaha 2, 6 iyo 11
Laga bilaabo 8 November - Sanadaha 3, 4, 5, 7, 8, 9 iyo 10
Talaalka ayaa qasan looga dhigayaa dhamaan shaqaalaha iskuulada oo dhan laga bilaabo 8 Nofember, laakiin mudnaanta koowaad ayaa la siinayaa laga bilaabo 6 Nofember.
Samayso balanta talaalka maanta.
Victoria waxay diiwaan galisay 79 kays oo cusub oo Covid-19 ah oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyay oo 53 ka mid ah lala xariirinayo kaysas hore halka 25 kays aan la garanayn meesha ay laga soo qaaday.
Ku dhawaad16,000 qof oo deggan Shepparton oo guud ahaan shacabka ku nool ay gaaraan 65,000, ayaa la aaminsan yahay inay guryohooda ku karantiilan yihiin iyadoo dukaano, farmashiyayaal iyo xarumo kale lagu qasbay in xiraan shaqaale yari awgeed.
Halkan ka fiiri xarunta talaalka ee kuugu dhow.
ACT waxaa laga helay 21 kays oo cusub oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyay taasoo tirada guud oo dadka qaba xanuunka gaarsiinaysa 209 kays.
Caasimada dalka ayaa looga dhawaaqay isbadalo dhaqan galaya 11.59 caawa oo la xariira meheradaha, adeegyada qashinka qaada, goobaha lagu jimicsado, iskuulada qoob ka ciyaarka iyo shirkada guryaha gada
Halkan riix si aad u ogaato inaad talaalka COVID-19 xaq u leedahay.
24 saacadood oo u danbeeyay ee Australia
Koofur bari Queensland oo sii qafiifinaysa xanibaadaha COVID-19 laga bilaabo maanta 4 galabnimo.
Gudiga Talo Bixinta Talaalka ee Australia ayaa ansixiyay in talaalka PFizer lagu talaalo caruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15.